Uvimba-mpepha weJob - Iindaba zeSikolo ngoku: Iindaba zeSikolo ngoku
Kufakwe kuyo umsebenzi by Inqaku labahleli beTMLT NgoAgasti 2, 2021
Umsebenzi weCrossover Portal eNigeria 2021: Ngaba ujonge imisebenzi yeCrossover eNigeria 2021? Ngaba ungathanda ukusebenza eCrossover? Kananjalo awuyi kucinga ukuba sikukhokela ngendlela onokuthi ufake ngayo isicelo sokufumana imisebenzi eCrossover eNigeria nangaphaya? Ukuba ewe, qhubeka ufunda. Joyina iCrossover Crossover izinze kwi […]
Imisebenzi yeCrossover eNigeria 2021: Ngaba ujonge imisebenzi yeCrossover eNigeria 2021? Ngaba ungathanda ukusebenza eCrossover? Kananjalo awuyi kucinga ukuba sikukhokela ngendlela onokuthi ufake ngayo isicelo sokufumana imisebenzi eCrossover eNigeria nangaphaya? Ukuba ewe, qhubeka ufunda. Njengomntu ophumeleleyo, kukho okutsha […]
Imisebenzi yokufundisa kufutshane nam 2021: Ngaba uphakathi kwabo bafuna imisebenzi elungileyo yokufundisa kufutshane nam eNigeria? Ukuba ewe, mamela ke. Eli phepha libonelela ngezikhokelo malunga nendlela yokufaka isicelo seMisebenzi yokufundisa kufutshane nam eNigeria njengesiqu. Esi sikhokelo sokugaya abantu siya kunika iimpendulo kwimibuzo efana nale; Indlela yokwenza isicelo sokufundisa […]
Ukuqeshwa kwakhona kwe-FRSC: Ngaba uyazi ukuba yonke into yokugaya abantu ngamathuba okuba baqeshwe? Ngaba uyazi ngezokhuseleko malunga nokuhlala kwakho? Ngaba uyafuna ukuthatha inxaxheba ekugayweni kwe-FRSC 2021? Ukuba ewe, funda eli nqaku isikhokelo sendlela yokufaka isicelo sokugaywa kwakhona kwe-2021 FRSC I […]
Ukuqeshwa kwakhona kwe-FRSC 2021: Ngaba ulutsha oludlamkileyo olungaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala? Ngaba unomdla kulo naliphi na iqela elinamandla? Ngaba unomdla wokujoyina i-Federal Road Safety Corps? Ukuba kunjalo, funda eli nqaku ngocoselelo, uya kwaziswa ngayo yonke into enento yokwenza ne […]
Imisebenzi ye-PhD eNigeria 2021: Apha ngezantsi kweli nqaku, uya kufunda ngemisebenzi emangalisayo ye-PhD eNigeria. Kananjalo, kuya kufuneka uzithathele ingqalelo yokuba unethamsanqa lokufumana eli phepha. Kananjalo, uya kukhokelwa ukuba ungasifaka phi / njani isicelo seminye yale misebenzi ye-PhD eNigeria ngo-2021. Ke, naka ingqalelo njengoko ufunda […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela NgoAgasti 2, 2021	• 8 Comments
Imisebenzi eLagos 2021/2022: Olu luhlu oluhlanganisiweyo lwalo lonke ilizwe laseLagos kwizithuba zomsebenzi zamva nje. Kwesi sikhokelo, uya kuhlaziywa malunga nendlela yokufaka isicelo sokufumana imisebenzi yakutshanje eLagos, iimfuno zokugaya inkampani, iziqinisekiso, izikhokelo kunye nolunye uhlaziyo olufanelekileyo. Esi sikhokelo sokugaya abantu siya kunika iimpendulo kwimibuzo efana nale; Imisebenzi yakutshanje […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela NgoAgasti 2, 2021	• 4 Comments
Imisebenzi eNgcono yokuFundisa eNigeria 2021: Ngaba ujonge umsebenzi olungileyo wokufundisa eNigeria? Eli phepha libonelela ngezikhokelo malunga nendlela yokufaka iMisebenzi yokuFundisa eNigeria njengesidanga. Qhubeka ufunda kwaye uza kufumana ulwazi oluthe kratya malunga nezithuba ezishushu kunye neemfuno. Esi sikhokelo sokugaya abantu siya kunika iimpendulo kwimibuzo […]
Kufakwe kuyo umsebenzi by Abasebenzi bokuhlela NgoAgasti 2, 2021	• 0 Comments
I-FRSC yokuGaya iPortal kunye ne-Portal yesicelo seMisebenzi 2021: Eli phepha lenziwe ngenjongo yokunceda abalindeli baseNigeria, benqwenela ukwazi okungakumbi malunga nefom yokugaya i-Federal Road Corps Corps (i-FRSC), iimfuno zayo, izikhokelo kunye nenkqubo yobhaliso. Qhubeka ufunda eli phepha njengoko uza kufumana ulwazi oluninzi kuKhuseleko lweNdlela kwiFederal […]
Imisebenzi yakutshanje eNigeria 2021: Umsebenzi waseNigeria uhlala enenqanaba lokhuphiswano olunamandla. Nokuba unomdla kukhuseleko lwengeniso, izibonelelo zezempilo, okanye izibonelelo zeengxowa-mali zepenshini, kukho abaqeshi abanqwenelekayo. Kwakhona, maninzi amathuba emisebenzi eNigeria. Kodwa ukufumana enye yazo kufuneka uqonde ukugaywa […]